Sunflower: Obere Pane Pane File Explorer maka Linux | Site na Linux
Sunflower: Obere Pane Pane File Explorer maka Linux
Dị ka anyị kwuru na mbụ, anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ ha na-enwekarị ọtụtụ ụdị nke ọ bụla na-eme ha. Ya mere, anyị pụrụ ịnụ ụtọ a Nkesa ya na otu Desktọpụ gburugburu ma ọ bụ karịa, ndị njikwa windo, ndị njikwa buut, ndị njikwa nbanye, sava eserese na ihe ndị ọzọ, dịka, "Ndị na-enyocha faịlụ", n'etiti nke enwere ụfọdụ na-adọrọ mmasị na nhọrọ ọzọ, dị ka nke a na-akpọ "Sunflower".
Ka anyị cheta nke ahụ "Ndị na-enyocha faịlụ" bụ mmemme ndị ahụ na-abụkarị akụkụ bụ isi nke ọ bụla Usoro njikwa, nke ahụ na-enye gị ohere ijikwa kọmputa gị, jikwaa faịlụ na folda, ịmalite ngwa, tinyere ihe ndị ọzọ. Ma nke ahụ kwa, n'ime GNU / Linux ọ bụla «Desktọpụ Environment» na-ewetara ndabara.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, e nwere ọtụtụ iche iche nke "Ndị na-enyocha faịlụ", ma maka GUI (Desktọpụ) dika CLI (Ọnụ) na ụfọdụ bụ ezigbo mma uzo ozo ka nke kasị mara amara na-ejikwa, dị ka Nautilus, "Dolphin" y "Thunar".
Na mgbakwunye, ụfọdụ n'ime ha ekwuola na weebụsaịtị anyị na akwụkwọ ndị gara aga, nke anyị ga-ahapụ n'okpuru, nke mere na mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a ị nwere ike ịchọpụta ha.
Filebrowser - Ezigbo njikwa faili ntanetị
Marlin: ihe na-adọrọ mmasị na Nautilus
nnn onye njikwa faili CLI magburu onwe ya dikwa nma na oso
1 Sunflower: Dual Pane File Explorer
1.1 Gịnị bụ Sunflower?
1.2 Nbudata, ntinye na nseta ihuenyo
1.3 Ndepụta nke ndị a ma ama na ndị na-enyocha faịlụ ọzọ
Sunflower: Dual Pane File Explorer
Gịnị bụ Sunflower?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na-ekwu "Ihe nchọgharị faịlụ" A kọwara ya dị ka ndị a:
"Sunflower bụ apObere na ukwuu customizable sọrọ pane faili faili maka Linux. Ebumnuche ya ka ọ dị ike ma dị mfe iji, ma nyekwa ezigbo njikọ na GNOME Desktop Environment, mana na-enweghị njedebe na ya."
Ọzọkwa, na ya gọọmentị saịtị na GitHub, ha tinye banyere "Sunflower" nke na-esote:
"Sunflower na-abịa na nkwado maka plugins na dakọtara zuru oke na ụmụ amaala Wayland."
Ndien ke akpatre, ke enye Weebụsaịtị GitLab, akụkọ banyere "Sunflower" nke na-esote:
"Sunflower dị ugbu a na nọmba mbipute ya 0.4. Versiondị a na-egosipụta interface ọhụrụ GTK3 nke na-etinye nkwado Python3 iji kwado mmepe n'ọdịnihu. Tụkwasị na nke a, mgbanwe na interface na imegharị koodu Sunflower emeela ka ọ nwee nnukwu uru arụmọrụ na iji nchekwa nchekwa."
N'okwu m, anwalewo m ya MilagrOS (Respin wuru na MX Linux 19.X na XFCE), mgbe ị gara ileta gị download ngalaba, budata onye nhazi ya "Debian", ugbu a na-akpọ "Sunflower-0.4.62-3.all.deb", ma wụnye iwu na-esonụ:
Ma ndị a bụ screenshots (ihuenyo) enwetara site na-akpali mmasị "Ihe nchọgharị faịlụ":
Mepụta faịlụ na folda menu
Dị iche iche nhọrọ menu
Dezie menu nhazi
Extra nhọrọ menu
Sunflower Mmasị NchNhr
Ndepụta nke ndị a ma ama na ndị na-enyocha faịlụ ọzọ
4Pane Njikwa faili
Cfiles Ngwa Njikwa faili Njikwa ngwa ngwa
Deepin Njikwa faili
Ugboro abụọ Ọchịagha
Gbalịa Mark II
fff (Iberibe Ngwa-Njikwa faili)
Gentoo Njikwa faili
Onye isi okwu
Lfm Ikpeazụ Njikwa faili
Ọchịagha etiti abalị
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Sunflower», na-akpali mmasị Njikwa Explorer okpukpu okpukpu abuo, obere ma di elu nke anyi GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Sunflower: Obere Pane Pane File Explorer maka Linux
GNOME 40 rutere na mkpokọta interface redesign, ndozi na ndị ọzọ
Richard Stallman kwupụtara nloghachi ya na ndị isi oche FSF